Ndị na-emepụta ụgbọ okporo ígwè nke China na ndị na-ebubata ihe - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ
Ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, a elu ọkachamara emeputa & Exporter na China na kemgbe na plastic ahịrị n'ihi na ihe karịrị 20 afọ na na sanitary ware ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, Ọzọkwa. anyị ejirila usoro njikwa njikwa mma ISO 9002S na mbụ nke 1999. anyị na-arụpụta ngwaahịa ya niile na China. Ngwaahịa anyị bụ ahịrị ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere dị ka ndị a: isi ịsa ahụ, aka ịsa ahụ, ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ, ndị na-eji mmiri ịsa ahụ, mmiri ịsa ahụ, ihe ịsa ahụ, braket mgbidi ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ & ngwa ime ụlọ ịsa ahụ yana ịzụ ahịa na ngwaahịa ịdị ọcha ndị ọzọ na Emere na webụsaịtị China.
Ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ bụ ngwaahịa dị mfe maka ịhazigharị ịdị elu nke ịsa ahụ. E jiri ya tụnyere setịpụ ịsa ahụ, ọ dị oke ọnụ ahịa. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ mgbazinye. Anyị nwere ihe karịrị ụdị 30 maka gị ịhọrọ.
Ejiri igwe na-akpụzi injection nke kọmputa na-achịkwa ọhụrụ; Usoro nyocha dị elu na igwe nkwakọ ngwaahịa ọnya, anyị nwere ike ịnye gị mkpanaka ịsa ahụ dị elu dị ka mkpa gị si dị. Banyere nkwakọ ngwaahịa, anyị dị mma na nkwakọ ngwaahịa ọnya na igbe agba. N'ezie, ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ihe achọrọ, anyị nwere ike ịnye ụfọdụ nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche. Dị ka onye nrụpụta, anyị nwere ebe a na-akpụzi anyị, ndị injinia nwere ahụmahụ na-adị njikere mgbe niile ime mgbanwe ọ bụla na ndozi ngwa ngwa dịka ihe ị chọrọ.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ na china. Ogo anyị dị elu Ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.